Street Light Pole mpamatsy ary mpanamboatra - Shina orinasa - Langxu Lighting.
Home > Products > Light Pole > Street Lighting Pole > Street Light Pole
Fangatahana teknika jiro eny an-dalambe:
1. Ny haavon'ny tsanganana dia 4-15 metatra. Ny poste dia vita amin'ny vy avo lenta amin'ny Q235. Ny halavam-ny andry dia 60-120mm, ny savaivony dia 132-290mm, ny halavan'ny rindrina dia 2.3-6,0mm, ary ny 240% 240mm ny flange. 400 * 400mm, manga ny fomba mahazatra.
2, ny varavarana elektrika dia manana sehatr'asa fampiasa mety, misy varavarana fametrahana elektrika; ny elanelana eo anelanelan'ny lela sy hidy tsy tokony hihoatra ny 1 mm, miaraka amin'ny haingon-tsehatra tsara amin'ny rano; misy rafitra fifadian-kanina manokana, misy fampisehoana tsara anti-halatra, ny fananganana bolt Open miaraka amin'ny fitaovana tsy misy jeneraly.
Ny poste dia vita amin'ny vy vita amin'ny karbonina Q235A kalitao avo lenta (izay misy Siâ ‰ ¤0.04%, manome tanjaka> 245Mpa), ary ny fenitra dia mahafeno ny fenitra fampisehoana: GB699-88.
4, fizotran'ny lasantsy
Ny vatan-tsoka manontolo dia tokony ho afaka amin'ny famoretana, fikorontanana lefona, lavaka mitohy tsy an-kiato, undercut, sns. Ny seam-basy dia malama sy malefaka, tsy misy fihenjanana ary tsy misy fihenjanana, tsy misy fatiantoka enti-mando, ary mitaky ny valin-kafintena manala ny fahitana. Ny fenitra fanodinana dia miorina amin'ny: GB / T3323-1989III. Ny fenitry ny fiarovana dia mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly GB7000.1-7000.5-1996.
5, famolavolana hafanana hafanana
Ny vovony anatiny sy ivelany misy asidra mafana mafana dia tokony hokarakaraina amin'ny harafesina, ary mifanaraka amin'ny fenitra GB- / T13912-92 ny hatevin'ny â ‰ ¥ 75um. Ny fiainana ny serivisy famolavolana dia tokony ho latsaky ny 30 taona, ny fantsom-pahazotoana dia tokony ho malama sy tsara tarehy, mitovy ihany ny loko, ary tsy ho voapaika ny hoditra aorian'ny fisolokiana. Manomeza tatitra momba ny fanadinana.
6, fomba fanamboarana tsiranoka
Ny plastika famafazana dia tokony vita amin'ny vovobony polyester madio ivelany, fotsy ny loko (mahazatra na araka ny takian'ny mpanjifa), maharitra ny kalitao plastika, tsy malemy, tsy mihintsana. Famaranana mafy, fanoherana mafy ny tara-tana amin'ny tara-masoandro, taratra manohitra ny ultraviolet, ary tokony hiaraka amin'ny farihy amin'ny faritany sy faritra masira. Ny tahan'ny fiainana amin'ny famolavolana dia latsaky ny 30 taona, ny hateviny â ¥ ¥ 80um, mifanaraka amin'ny fenitra ASTM D3359-83. Manome tatitra momba ny fitsiriritana. Fepetra fiarovana ny famafazana: ny hatevin'ny sarimihetsika dia tsy latsaky ny 40um, ny haingon-trano mahery, ny fikapohana ny lamba (15 * 6mm metatra) tsy afaka mihosotra ny hoditra, tsy mihintsana. Ny velarany dia malama ary ny mitovy loko ihany.
C. Asio tombo-kase sy manarona ny tampony amin'ny rivotra tsy misy rano.
8, fitsapana fahatokisana
Aorian'ny fanajana ny tsato dia ampiasao ny theodolite mba hanamarinana ny maha-eo anelanelan'ny andry sy amin'ny sisiny. Ny fijanonana dia tokony ho latsaky ny telo arivo taona.
9, ny hevitry ny vatana
10. Ny bolongana rehetra, ny voanjo, sns dia vita amin'ny vy vy (ankoatra ny vatofantsika sy ny voanjo).
11. Ny alàlan'ny tariby anatiny amin'ny paositra dia tsy miorina, mora kofehy ary tsy manana sisiny maranitra, burrs, nify ary ny toy izany mba hialana amin'ny fahasimbana amin'ny tariby.
12, ny tsato-jiro dia ahafahana miaro ny tselatra sy ny filàna fototra, 2 mari-pahaizana ambient: -15-50 degre Celsius; hafainganam-pandeha rivotra: 36m / s; fanoherana ny herisetra: 8; hery fanoherana: 30 taona.
Hot Tags: Street Light Pole, Shina, Manufacturers, mpamatsy, Factory, Wholesale, Buy, namboarina, ao amin'ny staoky, Cheap, Pricelist, teny nindramina, Style